FAQ - Sand paompy, Sump Pump, Gravel Pump Manufacturer
Manana modely hafa Price .we hafa dia hisafidy ny modely toy ny isan-ny masontsivana izay atolotrareo. ary avy eo dia nanonona sy hanao fifanarahana .so pls voalohany manomana ny masontsivana.
Tsia, tsy mba manana ny ambany indrindra dia be. indraindray ihany no tokony hitondra ny entana ny seranana, ka pls voalohany manamarina ny entana anjara-raharaha amin'ny forwarder.
Eny, dia manana ekipa matanjaka fandrafetana. Ny vokatra dia azo atao araka ny request.you afaka mandefa ahy ny sary ary afaka manao izany toy ny isan-.
Eny, tena afaka manome tahirin-kevitra ao anatin'izany Certificates ny Analysis / Conformance; Insurance; Origin, sy ny antontan-taratasy fanondranana aiza required.also ny drafitra sary sy miampita sectional sary.
Fa santionany, ny fe-potoana dia ny 7 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 20-30 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha ny firaka fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao so.we manana be dia be ny piesy ao amin'ny tahiry, ka ny fotoana fanaterana Tsy sarotra indraindray.
50% petra-bola mialoha, 50% fifandanjana manohitra ny kopian'ny B / L. isika fandoavam-bola kokoa ny TT teny .also L / C dia ok.
ho an'ny faritra sasany, dia manome fiantohana amin'ny taona iray Aho, fa ho wetted faritra, matetika izany dia ho 3-6months .this dia miankina amin'ny toe-miasa isan-karazany
Eny, isika hampiasa foana fanondranana packaging.we avo lenta no fanondranana izany fa efa ho 16 taona, izany no izy, dia aza manahy ny momba ny entana.